युवा को लागि टिप्पणीहरू: पाठ 04 - पहिलो चर्च नेताहरू - 21 28 जुलाई गर्न 2018 - स्कूल अनलाइन पोर्टल विश्राम दिन
मुख्य पृष्ठ / COMENTÁRIOS PARA JOVENS - 3° TRIMESTRE 2018 / युवा मान्छेहरूको लागि टिप्पणीहरू: पाठ 04 - चर्चको पहिलो नेताहरू - जुलाई 21 को 28 सम्म 2018
घर 24 जुलाई 2018	COMENTÁRIOS PARA JOVENS - 3° TRIMESTRE 2018 टिप्पणी छोड्नुहोस् 628 दृश्य
अक्टोबर मा अक्टोबर - जुलाई 21 को 2018 - हप्ता को अगाडी
"र परमेश्वरको वचन बढ्यो, र यरूशलेममा चेलाहरूको संख्या छिटो बढ्यो र पूजाहारीहरूको ठूलो भागले विश्वास गरे" (अधिनियम 6: 7, अल्मेडा समकालीन संस्करण)।
असल उदाहरणहरू संसार परिवर्तन गर्न शक्ति छ, तर व्यर्थ व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई ख्रीष्टलाई बदलिदिए। यस वाक्यांशले मलाई उनीहरूको जीवनमा फरक पार्ने व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे विचार गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अब्राहम लिंकन र दासत्वको बारेमा सोच्नुहोस्; मार्टिन लथर राजा द्वारा अमेरिकी क्रांतिमा। तिनीहरू र धेरै अन्यहरूले इतिहास परिवर्तन गरे, सबैका लागि तिनीहरूका आदर्शहरू, मानहरू र सिद्धान्तहरू थिए।
ईसाईयतको बारेमा सोच्दा येशू अरू कसैको सामु सोच्न आउनुहुन्छ। उहाँले के गरिसकेको छ सबै अनन्तसम्मको लागि सम्झना। तिनको उदाहरणले निर्णयको घाटीमा भीडलाई असर गर्यो। तिनको उदाहरणले कथालाई विभाजित गर्यो। र जब मास्टर स्वर्गमा जानुभएको थियो, उनले एक मोडेल छोडे कि धेरै अन्य पुरुषले अपनाए। ख्रीष्टियन चर्चको प्रारम्भिक नेताहरू ख्रीष्टको धेरै व्यक्तिको बलियो ढाल हुन्। नेतृत्व गर्नेहरूले परमेश्वरको इच्छाअनुसार काम गरे जस्तै, मसीही चर्चको इतिहासलाई चिन्ह लगाइयो।
वास्तवमा, हामी आज, धन्यवाद, पहिलो, मानवता को मुक्तिका लागि आवश्यक बचाउँछ गर्ने परमेश्वर र ती मानिसहरूलाई बचाव भन्ने तथ्यलाई भन्दा बढी आफ्नो जीवन प्रेम नगर्ने मात्र ख्रीष्टियन को सत्य छ। मेरो निर्णय र मलाई आशा छ तपाईंको पनि थप प्रत्येक दिन विश्वासको यी मानिसहरूको अद्भुत कामहरू संग झन् खुला मन पवित्र आत्मा थप येशूको साँचो उदाहरण हुन अपार्टमेन्ट कसैले हामीलाई परिवर्तन गर्न सिक्दै र हुन छ ।
यो हप्ता हामी यी नेताहरूको जीवन र सेवकाईको उदाहरण अध्ययन गर्नेछौं र हामी कसरी तिनीहरूको गल्ती र सफलताबाट सिक्न सक्छौं। आखिर, बुद्धिमानी भनेको हो जसले असल उदाहरणहरूको प्रतिलिपि बनाउँछ र अरूको त्रुटिलाई उल्टो नगर्ने रूपमा प्रयोग गर्दछ। अब यो प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले यो नयाँ पाठमा गहिरो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईंले परमेश्वरको आशीर्वाद पाउनुहुनेछ। राम्रो अध्ययनहरू!
लाग्छ: "ख्रीष्टको उदाहरण पछ्याउने हरेक मजदुरले परमेश्वरले आफ्नो चर्चलाई पृथ्वीको फसलको परिपक्वताको प्रतिज्ञा गर्नुभएको शक्तिलाई ग्रहण गर्न र काम गर्न सक्नुहुनेछ। बिहान पछि बिहान आफ्नो भाकल उहाँको consecration Renewing द्वारा प्रभु अघि सुसमाचार को heralds घुडा टेक्नु, उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको आत्मा को उपस्थिति यसको reviving संग, पवित्र पार्ने शक्ति प्रदान गर्नेछ, " (एलेन जी व्हाइट, प्रेरितहरु को प्रेरित, 31)।
चुनौती: के तपाईं प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियन चर्चका नेताहरूको इतिहास जान्नुहुन्छ? केही क्षणहरू हप्ताको समयमा तिनीहरूलाई बढी जान्नको लागि लिनुहोस्। लेखक एलेन व्हाइट द्वारा "प्रेरितहरूको प्रेरितहरू" पुस्तक, यी पुरुषहरूको भित्ताबाट छुटकारा दिन्छन्।
SUNDAY, 22 जुलाई 2018 - क्षमता को बिरुद्ध
क्षमता समावेश गर्न, समायोजन गर्न वा केहि भण्डारण गर्ने क्षमताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ; उत्पादनको शक्ति, निष्पादनको; वा अधिकतम उपज। बच्चाहरु मा परिवर्तन, शक्ति हो जसले बिना कुनै पनि अपमानजनक परिस्थितिहरु लाई सम्भव गराउन सक्षम बनाउँछ। संसारमा धेरै व्यक्तिहरू वजन, दौड, तैरने, पनि सोच्न र खान लिने क्षमताको साथ छन्, तथापि, यी मानिसहरू पनि एक निश्चित सीमा पुग्छन्। समय आउँछ जब टाढ टायर हुन्छ, टाँटी दुखाउँछ र शरीर जारी राख्न सक्दैन।
ईसाई जीवनमा धेरै ख्रीष्टियनहरू महसुस गर्छन् कि उनीहरूको अत्यन्त सक्षम एथलीटहरू छन्, सम्भवतः पनि तिनीहरूमध्ये केहीले वास्तवमा सामना गर्ने क्षमता र दुःख र अनियमित संख्याको विजय हासिल गर्छन्। तर त्यहाँ एक समय आउँछ जब उनीहरूलाई मद्दत चाहिन्छ। यी घडीहरूमा भगवानको अवसर आउँछ र देखाउँदछ कि यी मानव सीमाहरूको पछि अझै केही छ, र उहाँ बिना नै मानवताले केही गर्न सक्दैन। तपाईं आफ्नो इच्छा अनुसार सबै केहि गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर समय आउँछ जब तपाईं रोक्न र माथिबाट मद्दत माग्नु आवश्यक छ।
परमेश्वरले आफ्ना सँगी उद्देश्यहरू पूरा गर्न सक्षम व्यक्तिहरूलाई रोज्नुहुन्छ। अधिकांश समय उहाँले कम सम्भावित व्यक्ति छनौट गर्नुहुन्छ, किनभने यसको शक्ति कसरी हाइलाइट गरिएको छ (1 कोरिन्थी 1: 27-29)। मेरो मतलब छैन कि परमेश्वरले सधैं मानिसहरु को छनौट को बिना महत्वपूर्ण क्षमताओं को चुन्नुहोस। यी उदाहरण मध्ये एक प्रेरित पावल हो, जसले एनटीको महान नाम मध्ये एक थियो र जो दमिदको बाटोमा ईश्वरीय कल प्राप्त गर्नु पहिले नै सक्षम थियो। ईश्वर, धेरै परिस्थितिहरुमा, आफैले हाम्रो क्षमताहरू भन्दा माथि राख्छ ताकि हामी पनि त्यो महिमा उहाँको महसुस गर्छौं, किनभने सबै उपलब्धिहरु, विशेषकर एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्यबाट, उहाँमा मूल छ।
समय, विभिन्न परिस्थिति सामना गर्न हाम्रो क्षमता हामीलाई चमत्कार को सक्रिय एजेन्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने भूल बनाउन सक्छ। परमेश्वरबाट उत्पन्न क्रेडिट कार्ड हटाउन खोज्ने सबै कुरा परमेश्वरको राज्यको साथमा भाग छैन। के तपाईं प्रभुको लागि कुनै काम गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ? जस्तो जस्तो नसोच्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईंलाई कसैलाई बनाउन सक्नुहुन्छ जसले धेरै मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। हुन यो लागि प्रमुख हामी सबै को लागि, हामी वा, प्राप्त गर्न सक्छन् उहाँलाई प्रमाणित, आत्मा को उपस्थिति खोज्न छ। हामी पवित्र आत्मा नेतृत्व र यसको smallness पहिचान गर्नेहरूको नम्रता संग मन खुला आफ्नो प्रभाव र निर्देशन राख्न गरौं भने, उहाँले के उहाँले तिनीहरूले भनिन्छ थिए तिनीहरूलाई को स्पष्ट unpreparedness भए तापनि बाह्र चेलाहरू मार्फत गरे, हामीलाई मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ।
लाग्छ: "बाइबिलले सत्यलाई यस्तो सरल तरिकाले प्रकट गर्छ, र मानव हृदयको आवश्यकताहरू र लामो समयसम्म बढाउँछ, जसले गर्दा सबै भन्दा बुद्धिमानी छक्क परे र प्रशंसा गर्छ, यसले नम्र र अनजानलाई पनि उद्धार गर्न उत्प्रेरित गर्छ। । यद्यपि यी स्पष्ट रूपले प्रस्तुत सत्यहरू उच्च र टाढा मानेका विषयमा सम्बन्धित छन्, यसैले असीमित मानव मानको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, हामी तिनीहरूलाई मात्र स्वीकार गर्न सक्दछौं किनभने यो परमेश्वर आफैले आफैले " (एलेन व्हाइट, पथ क्राइस्ट, पी 68)।
चुनौती: के तपाईं आफ्नो मिसनरी गतिविधिसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आजको लागि अलिकति प्रार्थना गर्न परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस् र सोध्नुहोस्।
सोमबार, जुलाई 23 2018 - समस्या र समाधान
तिनीहरू भन्छन् कि समस्याहरू अवस्थित छन्। र, वास्तवमा, त्यहाँ कुनै समस्या छैन जुन बाटो छैन जसमा व्यक्तिलाई बदल्न सक्छ र बाटो पत्ता लगाउन सकिन्छ। अन्तको लागि, समाधान सधैं भगवानको लागि, सबै राम्रो लेखकको हुनेछ। राम्रो तयारी योजनाहरू समाधानको लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर यसको अलावा, यो सही व्यक्ति पत्ता लगाउन आवश्यक छ ताकि समस्या ठीक तरिकाले हल गर्न सकिन्छ। सायद समस्याको कारण अनसुलझे रहन सक्छ यसको समाधान को लागी व्यक्ति को समाधान पत्ता लगाउने र नियोजन को भित्रीता को लागी हुन सक्छ।
पहिलो शताब्दीको चर्चले एउटा गम्भीर समस्याको सामना गर्यो। ग्रीक भाषी विधवाहरूले शिकायत गरेका थिए कि अरुको आवश्यकतालाई ध्यान दिई ध्यानको बीचमा फरक फरक थियो। त्यसपछि चर्चले सम्मानित प्रतिष्ठाको साथमा सात सक्षम पुरुषहरू छनौट गर्न समाधान गरे र आत्मा र बुद्धि भरिएको थियो। परमेश्वरले ती मानिसहरूको छनौटलाई डोऱ्याउनुभयो, जस्तै आज चर्चका छनौटहरू, दुवै चर्चमा र बाहिरका पदहरूमा।
म भन्न चाहन्छु, अक्सर, धेरैले परमेश्वरको इच्छा बहुमतको विरोध गर्न आवश्यक छ ताकि निर्णय गर्ने बारेमा निर्णय गर्नु हुँदैन, किनभने यो चर्चको लागि लाभदायक हुनेछैन। परमेश्वरले पनि हाम्रो गल्ती कसरी आशिष्मा बदल्न जान्नुहुन्छ। यद्यपि, यो सधैं संधै हुन्छ। त्यसोभए, सधैं हाम्रो गल्ती गर्न भगवानको पर्खिनुको सट्टा, हामीले पूर्णतया परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न खोज्नुपर्छ। त्यो राम्रो हुनेछैन!
यो मान्छे को चाँडै काम को कमी छ। व्यक्तिहरूले सन्तुष्ट गर्न चाहने व्यक्तिहरू चासो गर्दैनन्, तर जो कोहीले माथिको इच्छाको इच्छा गर्न इच्छुक हुन्छन्, भले पनि यो आत्म-दुःखको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। चुनेका डेकन अलग व्यक्ति थिए। कुन कुरा बाहिर उभिएको थियो स्तिफन, जसले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरे र पवित्र आत्मा पाएको थियो। धर्मशास्त्रको सत्यताको रक्षाले अनावश्यक तुल्याएको थिएन। के तपाईं स्टिफन जस्ता व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ, कसको संसारको योग्य थिएन? परमेश्वरले तपाईंको निर्णयमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ!
लाग्छ: "जो सरकारको पुनर्जागरण गर्नेहरू नैतिक भ्रष्टाचार, गरिबी, पापीरवाद र अपराध बढाउनमा सक्षम हुन्छन्। तिनीहरू सुरक्षित आधारहरूमा व्यावसायिक अपरेसनहरू राख्न बेकार छन्। यदि पुरुषहरूले परमेश्वरको वचनको शिक्षामा अझ बढी ध्यान दिएका छन् भने, उनीहरूले ती समस्याहरूको समाधान पाउनेछन् जुन तिनीहरूलाई " (एलेन व्हाइट, सोशल कल्याण, पी। 163)।
चुनौती: आज तपाई कस्तो समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ? र तपाईंको धार्मिक समुदाय? प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईंको चर्चको जीवनलाई ज्योति दिनुहुनेछ ताकि यो निरन्तर बढिरहन्छ।
युएई, जुलाई 24 को 2018 - संगठन र विस्तार
समय बितेर र पवित्र आत्माको कामको साथ, चर्च घातक रूपमा बढेको छ।
आज, थुप्रै सुसमाचारकहरूले आफ्नो तरिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन योजनाहरू सिर्जना गर्न खोज्छन् र पहिलो शताब्दीका जस्तै परिणाम दोहोर्याउनका लागि। परमेश्वरले यस दिन मण्डलीलाई आशिष् दिनुभएको छ, यो बढ्न बन्द छैन, तर निरन्तर विकासमा रहेको छ। तर यस वृद्धिलाई संगठन चाहिन्छ। केही मानिसहरू तथापि, यो सबै एक निश्चित अर्डर आवश्यक छ कि विचार गर्न आवश्यक छ, र यो बिना काम बिगडा छ, तिनीहरूले यो आत्मा को कार्य सीमित लाग्छ किनभने, आफूलाई संगठित गर्न चर्च निर्णय विपरीत हुन सक्छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि चर्चले काममा विशेष कार्यको लागि सात जना पुरुषलाई अलग गर्न रोजेको छैन? यो संगठन को एक खुलासा छ। जब म चर्चको संगठनलाई मान्दछु मेरो मतलब भनेको सबै कुरा सही छ र परिवर्तन गर्न सक्दैन। नेताहरू मानव मानिसहरूलाई दोषी छन् जसले आत्माको मदतलाई त्यहाँ नेतृत्व गर्न आवश्यक छ।
चर्च। तर मलाई थाहा छ कि जब मण्डली इमानदार भई एकत्रित हुन्छ, यसको निर्णयमा परमेश्वरले अनुमोदन छ। चर्च केवल एक व्यक्ति द्वारा शासित नहीं गर्न सकिन्छ, तर सचेत व्यक्तियों को एक समूह द्वारा र उनको पुष्टि को कल संग।
चर्चको विस्तारको अलावा, एकलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जहाँ यो जान्छ र कुन निर्णयहरू गरिंदैछ, किनकि वृद्धि नेतृत्वको भागमा सावधानी चाहिन्छ। कुनै पनि समूहको सम्पूर्ण समूह वा स्थापित लक्ष्यको रूपमा महत्त्वपूर्ण छैन, र हामी, परमेश्वरका सेवकहरू र स्वर्गका वारीहरूको रूपमा स्वर्गमा कन्याको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य छ। मण्डलीलाई सावधान रहनु पर्छ परमेश्वरको इच्छा भन्दा माथि आफ्नै इच्छा राख्नु हुँदैन।
पहिलो शताब्दीमा चर्चको विस्तारमा योगदान गर्ने कारकहरूमध्ये, यरूशलेमको मसीहीहरूको सतावटले हाइलाइट थियो। यो परमेश्वरले कसरी दुष्टलाई आशिष्मा परिणत गर्नुहुन्छ, एक सुन्दर वास्तविकता कसरी आजको प्रतिबिम्ब अन्त्य गर्न को एक उदाहरण थियो। के तपाइँ खराब छनौट गर्नुभयो र यसको परिणाम पीडा गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले यो र तपाईंको लागि आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ।
लाग्छ: "चर्च निरन्तर विस्तार भएको थियो, र सदस्यतामा विकासले जिम्मेवारी लिनेहरूको लागि काममा स्थिर वृद्धि को प्रतिनिधित्व गर्यो। कुनै पनि, वा पुरुषहरूको पनि समूहले मात्र मण्डलीको भविष्यको समृद्धिलाई सहन बिना भारी बोझ लिन सक्छ। त्यहाँ जिम्मेवारीहरूको पुन: पुनरावृत्तिको लागि आवश्यक थियो जुन चर्चको प्रारम्भिक दिनमा केही विश्वासी भई गरिएको थियो। प्रेरितहरूले मण्डलीको सुसमाचारको संगठनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम उठाउनुपरेको थियो, पहिले नै ती बोझहरू " (एलेन सेतो, प्रेरितहरूको प्रेरित, 48)।
चुनौती: पल घुमाउनुहोस्, र यदि तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ, हप्ताको लागि थप पढाई चयन गर्नुहोस्: एलेन जी। व्हाइट। प्रेरितहरूको प्रेरित, अध्याय 2, "बारहको तयारी"। एलेन जी। व्हाइट रिसर्च सेन्टरमा अनलाइन उपलब्ध छ।
WEDNESDAY, 25 जूली 2018 - सेवा, कुनै पनि स्थिति मा केहि रोग
साँचो मसीहीले आफ्नो परमेश्वरको सेवा गर्न अनुकूल परिस्थितिमा निर्भर गर्दैन। उहाँ परिस्थितिहरूको परिकल्पना बिना विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, यो ईसाई पात्रको विशिष्ट चिन्ह हो। ईसाई ईश्वरीय परमेश्वरलाई कुनै असल भौतिक प्राप्त गर्न वा भगवान द्वारा राम्ररी देख्न पाउने छैन।
यो केवल ईर्ष्याजनक परिस्थितिहरू होइन जुन मसीहीलाई विश्वासबाट टाढा पुग्न सक्छ, तर स्रोतको सफलता र प्रशस्तता पनि एक शक्तिशाली जाल हुन सक्छ। शैतानले मानवको आवश्यकता र सपनाहरू थाह छ, र प्रत्येकको कमजोरी, र यसको जाल चयन गर्न यो प्रयोग गर्दछ। केहि बहुतायतको साथ प्रयास गरिन्छन् र अरु कम छन्। तर ईश्वरलाई ईश्वर गर्नेहरूले सधैं प्रलोभनहरू जित्छन्, उनीहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकाबाट स्वतन्त्र बनाउँछन्। महत्त्वपूर्ण स्थानहरू राख्ने विश्वासी मानिसहरूका दुई उदाहरणहरू यूसुफ र बेबेलमा दानियल थिए। पुरुषहरूले अनुकूल र अनुचित परिस्थितिहरूलाई अनुमति दिएनन् र उनीहरूको सोचाइ परिवर्तन गर्न र परमेश्वरको मार्गबाट ​​उल्टाउन।
गतिविधिको सबै क्षेत्रहरूमा ईश्वरीय मानिसलाई चाहिन्छ। सम्पूर्ण विश्व यो अनुमति दिन्छ जो कोहीले रूपमा हामी तपाईंलाई सहन सक्छ के (: 1 10 कोरिन्थी 13) परे प्रलोभनमा किनभने तपाईंको साँचो सेवकहरू कहिलेकाहीं मात्र तिनीहरूले सामना र जीत गर्ने क्षमता भनेर तथा प्रत्यक्ष परिस्थिति पकड पुग्न।
हाम्रो उद्देश्य दैनिक सतावट खोज्नु पर्छ ताकि हामीले प्रभुको सेवा गरिरह्यौं र साँचो दासले मालिकले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा उजुरी गर्दैन। राम्रो दास सबै भन्दा राम्रो तरिकाले सबै आदेशहरू पूरा गर्छ। हामी अझै पनि जान्दछौं कि प्रभु हामी काम गर्छौं विश्वासी र राम्रो छ, र हामीलाई प्रेम गर्दछ कि उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो ताकि हामी वास्तवमा स्वतन्त्र हुनेछौं।
लाग्छ: "यो हाम्रो सँगी मानिसहरूका लागि हाम्रो प्रेमको सुसमाचार हो जुन परमेश्वरको लागि हाम्रो प्रेम प्रकट गर्दछ। यो सेवामा धैर्यता छ, जसले हृदयमा आराम ल्याउँछ। यो विनम्र, लगनशील र विश्वासी श्रम हो जसले इस्राएलको कल्याण बढायो। परमेश्वरले ख्रीष्टको मार्ग पछ्याउने इच्छुकहरूलाई बलियो बनाउनुहुन्छ र बलियो बनाउनुहुन्छ " (एलेन सेतो, प्रेरितहरूको प्रेरित, 313)।
चुनौती: यी दिन तपाईंको सबैभन्दा ठूलो प्रलोभन के हो? के तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं आफैलाई पिट्नुहुन्छ? अब प्रार्थना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले लडाइँ र पापको विरुद्ध युद्धबाट विजय प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
थोरै, जुलाई 26 को 2018 - चुनौती दिल
हाम्रो लागि परमेश्वरको सामुको सही हृदयमा पुग्नको लागि, हामीले पहिलो र अग्रणी हुनुपर्छ, पवित्र आत्माको उपस्थिति खोज्न र उहाँलाई हाम्रो निर्णयको मार्गदर्शक एजेन्सीलाई अनुमति दिनुपर्छ। पापी लागि असम्भव uprightly धार्मिकता रूपमा ईश्वरीय मदत बिना कार्य हासिल गर्न विचलन बिना पालना गर्न एक सद्गुण न्याय को अर्थमा, निष्पक्षता संकेत निर्देशन कार्य, "छ; सभ्यताको साथमा रहनुको कारण, कर्तव्य संग; निष्ठा, चिकनता, सम्भावना, "केवल परमेश्वरको मदतको साथ मात्र सम्भव छ।
तर एक प्रश्न जो धर्मी हुन चाहने मनमा उठ्न सक्छ: मैले यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? त्यहाँ केही बाटोहरू छन्, बीचमा:
(1) हामी जान्दछौं कि बुराईको पश्चात्ताप गलत छ, तर हामी अझै पनि अभ्यास गर्छौं, र यो असहमति रवैयाले हाम्रो आध्यात्मिक विकासलाई रोक्छ;
(2) कमजोरीको समयमा ईश्वरीय सहयोगको लागि भयभीत प्रार्थना गर्न ताकि हामी दृढता हुन सक्छौ; र
(3) लगातार परमेश्वरको समर्पण गर्न र उहाँको डोऱ्याइ पछ्याउनु।
अक्सर, शुद्धता केवल आफ्नो पूर्णता मा प्राप्त भएको छ जब एक बलियो तनाव हो। एक उदाहरण सुनहरा छ कि, क्लीनर र क्लीनर बन्न, तीव्र आगोमा फ्याँक्नुपर्छ। हामी यथार्थ सबै दुष्टहरू पूर्णतया नराम्रो हो कि होइन, किनकि हामी उहाँमा हुनुहुन्छ कि हामी कसरी सिक्न सक्छौं र हामी अझ परिष्कृत हुन्छौं। हाम्रो शुभकामना हाम्रो लागि येशू जस्तै हाम्रो हुन आवश्यक छ। विश्वासको धेरै नायकहरू, तिनीहरूको हृदय सफा गर्नुअघि थुप्रै विशेष परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। योना, दाऊद, सुलेमानको उदाहरण हेर्नुहोस्, यूसुफका बाह्र भाइहरू र धेरै अन्य।
साँचो दास र येशूका चेलाको अधीनमा प्राप्त गर्न सही हृदय हाम्रो लागि आधारभूत छ। मानिसहरू जान्दछन् कि हामी येशूको हो भने हामी धर्मी हृदय छौं र आत्माले हाम्रो लागि र हाम्रो काम गर्दछ जब मात्र पुग्छ।
लाग्छ: "ईश्वरको दाबी गर्नेहरूलाई ध्यान राख्नुहोस् जो पूंजीसँग व्यापार गरेर परमेश्वरको द्वारा नियुक्त गरिन्छ, र जसले विश्वासी भई तिनीहरूको रोजगारको सन्दर्भमा धर्मशास्त्रको निर्देशन पछ्याउन आवश्यक छ। यदि तपाईंको हृदय परमेश्वरसँग सही छ भने, तपाईंको प्रभुको सामानको स्वामित्व लिनु नसक्नुले आफ्नै स्वार्थी प्रयासमा रोजेर " (एलेन व्हाइट, स्टेसन मा सल्लाह, पी। 49)।
चुनौती: आजकल क्षणहरू सेट गर्नुहोस् सबूतहरूमा मनन गर्न तपाईं सामना गर्दै हुनुहुन्छ वा पहिले नै सामना गर्यौं। त्यसपछि उनीहरूले तपाईंलाई कसरी बढ्न मद्दत गरे हेर्न कोसिस गर्नुहोस्।
फ्राइड, 27 जुलाई 2018 - यो जस्तै थियो, त्यसो त आज यो
प्रथम शताब्दीमा प्रेषितहरूले हाम्रो काम जारी राख्नै पर्छ। त्यो खत्म गर्न सक्दैन। त्यो चर्चले हाम्रो लागि धेरै काम गरेको छ र हामीले ती पछिका लागि धेरै गर्नै पर्छ। हाम्रो उदाहरण भविष्यको लागि स्थायी चिन्हहरू छोड्नुपर्छ, भले पनि हामी सोच्नु भन्दा अगाडी येशू आउछौं।
म प्रथम शताब्दीमा प्रस्तुत गर्दा चर्च वर्तमान वा भविष्यमा अधिक पछिल्लो valuing, एक nostalgic प्रस्तुति बनाउन, तर समय को बुँदा देखाउन र आज हाम्रो मिसन सेवा गर्न सक्ने सिद्धान्तहरू जोड गर्न चाहनुहुन्छ छैन। आज चर्च को पहिलो शताब्दी मा एक विशाल लाभ छ - टेक्निकल गैजेट्स संचार को इतिहास को कुनै अन्य समय भन्दा अधिक प्रभावी ढंग देखि ले जाने अनुमति दिन्छ। तथापि, आत्माको शक्तिमा भित्रीता एक स्पष्ट तथ्य जस्तो देखिन्छ। सबै संचित प्रौद्योगिकी मा एक दिल को रूपान्तरण को शक्ति छैन। यो प्रविधि होइन जुन तेस्रो स्वर्गदूतको काम गर्नेछ, न त आजको अस्तित्व हो, तर पवित्र आत्माको सर्वोच्च शक्तिले अभिषिक्त मानिसहरू।
प्रेषितहरू धेरै समान गल्तिहरूसँग त्यस्ता गलत गल्तीहरू र सफलताको लागि संवेदनशील व्यक्ति र तपाईंको जस्तै मानिस थिए। तथापि, एक कुराले उनीहरूको भनाइलाई ईश्वरीय हृदयलाई परमेश्वरको इच्छाले गर्दा। कसैले पनि परमेश्वरको बाहेक हृदयको न्याय गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले धर्मी हृदयलाई खुवाउनु पर्छ, किनभने परमेश्वरलाई धोका दिनु असम्भव छ। यदि हामी इमानदार छैनन् भने, प्रभुले थाहा पाउनुहुनेछ। हप्ताको यो अन्तिम प्रतिबिम्बमा मेरो इच्छा भनेको तपाईंको संसारमा स्थायी रूपमा खोजी र ब्रह्मांडको राजाको साँचो वारिसको योग्यता हो। शुभ शनिबार!
लाग्छ: "रोटी र फसलको समयमा पूर्वी मुलुकहरूमा आइपुगेको प्रारम्भिक र विद्रोही वर्षाको आंक्रामा, हिब्रू अगमवक्ताहरूले असाधारण उपायमा परमेश्वरको चर्चमा आध्यात्मिक अनुग्रहको बलिदानको भविष्यवाणी गरे। प्रेषितहरूको दिनमा आत्माको निर्दोष पहिलो वर्षाको शुरुवात थियो, वा प्रारम्भिक, र महिमा परिणाम थियो। समयको अन्त्यसम्म, आत्माको उपस्थिति साँचो चर्चसँग भेटिन्छ " (एलेन सेतो, प्रेरितहरूको प्रेरित, 30)।
चुनौती: हप्ताको लागि चयन गरिएको थप पढ्न पढ्नुहोस्: एलेन जी। व्हाइट। प्रेरितहरूको प्रेरित, अध्याय 9, "सात देवताहरू"। एलेन जी। व्हाइट रिसर्च सेन्टरमा अनलाइन उपलब्ध छ।
अघिल्लो वयस्कहरूको लागि टिप्पणी: 04 पाठ - मण्डलीको पहिलो नेताहरू - जुलाई 21 को 28 सम्म 2018
अर्को किशोरहरुको लागि टिप्पणी: 04 पाठ - उल्लेखनीय विश्वास - 21 28 जुलाई 2018